Momba anay | JiangXi HaiRui Natural Plant Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2006 izahay ary manampahaizana manokana amin'ny famokarana menaka zava-maniry voajanahary.
Ankehitriny manana ny fahaizan'ny 2000 t isan-taona isika. Hotazominay foana ilay hevitra hoe 'Ho tafavoaka amin'ny kalitao avo lenta, hivoatra amin'ny lazany' handresena ny tsena.
Ny orinasanay dia miorina ao amin'ny faritra fampandrosoana teknolojia avo lenta ao JingGangShan, tanànan'i Ji'an, izay malaza amin'ny hoe 'Town of Spices'. Toerana mahafinaritra feno akora, izay mahatonga antsika ho mandroso sy matihanina kokoa.
Amin'izao fotoana izao, manana mihoatra ny karazana sy mpanjifa eran'izao tontolo izao izahay. Ny tamba-jotra varotra manerana an'i Eropa, Amerika, Middle Eeat ary Azia afovoany sns. Tena raisin'olona HaiRui ianao. Hanome serivisy tso-po izahay, kalitao tsara ary vidiny mirary indrindra. ho an'ny hoavintsika mamirapiratra!
Ny fomba fiasa ara-tsaina amin'ny fambolena tena
Kolontsaina folo an'i Hai Rui
Voninahitra valo sy henatra valo an'i Hai Rui
Na inona na inona an-tranoko na any amin'ny orinasa dia tsy maintsy manaja azy sy izy aho;
Ny fandeferana dia tsy zakan'ny hafa, ary tsy azon'ny mpandeha an-tongotra atao;
Avelao ny zavatra tsy zakan'ny hafa ary ekeo izay tsy eken'ny hafa;
Ny fiasan'ny sasany dia hatsaràn'ny fahombiazana;
Avereno jerena ny hadisoako manokana rehefa mipetraka irery aho, aza miresaka momba ny fifosana mihitsy rehefa miresaka amin'ny hafa;
Manomboka amin'ny maraina ka hatramin'ny hariva, manomboka amin'ny hariva ka hatramin'ny maraina, miaina, mipetraka ary mandainga, mitafy sy misakafo;
Fahatokiana ara-pivavahana, fanajana ny mpampianatra, tsy fivadihana, tsy tapaka, feno fankasitrahana, tso-po;
Ny maha tompon'andraikitra ny hafa dia manome tsiny ny tenanao, ary mamela ny hafa;
Fisehoana tsara ihany, fa tsy endrika ratsy;
Na dia misy aza ny fandrosoana dia tsapako foana fa ambany dia ambany ny famboleko, ary tsy mirehareha amin'izany aho;
Mpampianatra ny rehetra, fa mpianatra aho. Raha afaka mamboly ny tenantsika amin'izany fomba izany isika dia hahita fahombiazana lehibe!
Vina: ho lasa orinasa manan-kery ao amin'ny indostrian'ny legioma ao Shina!
Iraka: manolo-tena amin'ny famolavolana, ny faharetana ary ny fanatontoloana ny indostrian'ny fitrandrahana legioma any Sina, ary ezaho ny indostrian'ny fitrandrahana legioma any Sina amin'ny sehatra manerantany!
Soatoavina: ekipa aloha, mpanjifa aloha, tompon'andraikitra sy mankasitraka ny fiaraha-monina
1. Fanahin'ny ekipa
2. Tsy misy fialan-tsiny amin'ny asa
3. Miasa ho an'ny iraka
4. Tariho amin'ny ohatra
5. Mifikitra amin'ny hafatrao
6. Miorina amin'ny valiny
7. Ny fanahin'ny angon-drakitra
8. Mihoatra ny folo heny ny sandany
9. Afo toy ny hafanam-po
10. Aza milavo lefona mihitsy
Mirehareha amin'ny maha-marina sy azo itokisana ary mahamenatra ny manadino ny fahamarinana noho ny tombom-barotra;
Mirehareha amin'ny fahazotoana sy ny fitandremana, ary menatra ho sada fo;
Mirehareha amin'ny valiny ary menatra amin'ny menaka manitra;
Mirehareha amin'ny fandraisana andraikitra sy mahamenatra amin'ny fanalalahana andraikitra;
Tokony hirehareha amin'ny fizarana malalaka sy mahamenatra ny fitiavan-tena isika;
Mirehareha amin'ny firaisankina sy firahalahiana izy, ary menatra fiokoana;
Ny fireharehana fankasitrahana, ny tsy fankasitrahana dia mahamenatra.
Tena mety ny fitaterana eto. Ny fampiasam-bolanay dia 18 tapitrisa RMB, manarona faritra 26000 sqm, miaraka amin'ny orinasa maoderina, fitaovana fanandramana ambony ary toerana fanandramana samihafa.
-Jiangxi HaiRui Natural Plant Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra sy mpivarotra lehibe indrindra ao Shina.